H2H - Tham's Condo @ Majestic Ipoh - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJenie
Ngaba ujonge indawo yokuhlala yasekhaya ecocekileyo eneendawo zokuzonwabisa eziphezulu? Sinendawo enomoya kwaye ecocekileyo ecocekileyo entliziyweni yendawo yabakhenkethi be-Ipoh.
Eli gumbi linamagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlambela eli-2 kumgangatho we-18 le-Menara Majestic's Imperial Tower ephumelele imbasa inemibono emihle yesixeko kunye neenduli ezisingqongileyo. Kungaphakathi kwemikhondo embalwa ye-Ipoh edumileyo yokutya kunye nemarike yasebusuku.
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle-kodwa kunokwenzeka ukuba utyele ngaphandle kwaye ukonwabele ukutya okuluncuthu kwasekhaya. Isihluzo samanzi e-Bacfree, i-oven ye-microwave, i-toaster, ifriji/ifriji, umatshini wokuhlamba, iayini, isomisi enwele, 50" SMART TV ene-Astro satellite, iWiFi, oomatrasi abatsha, imiqamelo kunye nelinen. Kukho indawo yokupaka ekhuselekileyo yemoto enye.
4.81 · Izimvo eziyi-118
Umbindi wesixeko-indawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Jenie
Izimvo eziyi-1 869
UJenie, Pot neqela labo e-H2H babonelela ngenkonzo yobuchwephesha, esebenzayo neyohlukileyo kwiindwendwe zakwa-Airbnb. Kanye nokuqinisekisa ukuba utyelelo lwakho luhamba kakuhle i-H2H inokulungiselela ukhenketho lwasekhaya, iinkonzo zokuhlamba impahla, ukugcinwa kwemithwalo, njl.njl - kwaye ivenkile yabo eluncedo ihlala ivuliwe kade.
UJenie, Pot neqela labo e-H2H babonelela ngenkonzo yobuchwephesha, esebenzayo neyohlukileyo kwiindwendwe zakwa-Airbnb. Kanye nokuqinisekisa ukuba utyelelo lwakho luhamba kakuhle i-…